Saddexda Murashax oo codadkooda dhiibtay iyo weedhihii ay ka yidhaahdeen Doorashada | Somaliland.Org
Saddexda Murashax oo codadkooda dhiibtay iyo weedhihii ay ka yidhaahdeen Doorashada
June 26, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Saddexda Murashax ee Jagada Madaxweynaha ugu tartamaya Xisbiyada Qaranka ,ayaa maanta ka mid ahaa 1,069,000 oo qof oo u dareeray codaynta Doorashada, isla markaana codkooda dhiibtay.
Saddexdan hoggaamiye oo maanta goob kaliya ka wada codeeyay wakhtiyo kala duwan, isla markaana codkooda ka dhiibtay goobta Guriga shaqaalaha ee badhtamaha Hargeysa oo caadiyan ay ka codeeyaan madaxdu.
Murashaxiinta u tartamaysa Madaxtinimada oo dadweynaha halkaa hadal kooban uga jeediyay, ayaa ugu horrayn waxa ka hadlay Murashaxa Madaxweynaha UDUB, ahna Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin. “Doorashadan guul Somaliland ah ayaan u arkaa codaynta maanta.” ayuu yidhi Daahir Rayaale, waxaanu intaas raaciyay, “Aad buu u sareeyaa dareenkaygu waana markii afraad ee aan halkan ka codeeyo. Waxaanan rajaynayaa inay khayr ku dhammaan doonto doorashadani.”
Murashaxa xisbiga UCID Md. Faysal Cali Waraabe, oo isna halkaas hadal kooban ka jeediyay ayaa yidhi, “Haddii boqol cod la igaga helo iyo haddii hal cod la igaga helo waan hanaynayaa. Waana inaan ogolaadaa go’aanka shacbiga iyo go’aanka Alle SWT.”
Dhinaca kale, Murashaxa Madaxweyne ee KULMIYE Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo isna halkaa ka hadlay, ayaa hadalladiisii waxa ka mid ahaa, dambayn halkaas ka codeeyay ayaa yidhi, “Halkan waxaan u imid inaan codkayga dhiibto waana waajib qaran oo I saaran, aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay inaan dhiibto codkayga, doorashadu way inoo hagaagi doontaa waxay noqon doontaa mid aynu qaran ahaan ku guulaysano, umad ahaana ku guulaysano Alle mid khayr qabta ha inooga dhigo.”
Previous PostSidee Dadweynuhu codaynta ugu dareereen Gobolka Saaxil (DAAWO)?Next PostCodayntii Doorashada Somaliland Oo La Soo Gebagebeeyey Iyo Tirintii Oo Bilaabantay	Blog